Air Fryer Ham - Fomba Fanamboarana
ny fomba fahandro asparagus amin'ny fryer
maninona no mafy ny k bar-ko manokana
Taco henan'omby atsobaka amin'ny fromazy fanosotra
firy ny kaopy tsy masaka amin'ny vary masaka
Ity fomba fahandro Air Fryer Ham ity dia mivoaka malefaka sy mamy miaraka amina famaranana manjelanjelatra!
Ankehitriny ianao dia afaka mahandro ny 'Sunday Ham' miaraka amin'ilay fryer mahatalanjona mandrakariva! Slice ity Air Fryer Ham ho cubes ary manamboara mofo voasesika , na mandroroa ham ham masaka ary ampio lasopy na atsipazo salady .
Hamono mora azo
Amin'ny fialantsasatra dia tian'ny zanako a hamirapiratra ham ny turkey voatono (Samy tiako daholo raha mbola manana aho Hala- ) ka ataoko a namboarina ham ho an'ny ankamaroan'ny fialantsasatra.
Air Fryer ham dia mety tsara ho an'ny a vahoaka kely kokoa .
Ity dia TSARA HO , mahandro adiny iray latsaka.
ny glasy mamy dia tsara miaraka amin'ny tsiro masira amin'ilay ham.
Tianay ny lovia fanendasana rivotra amin'ny haingana sy mora manadio !
Vaovao amin'ny fanendasa-rivotra? Zahao ny toerana tena tianay Air Fryer eto .
ronono mihinana ronono mihinana menaka manitra
hitady ny rivotra rehetra fryer eto ao anatin'izany ny torohevitra, tetika ary resipeo tsara indrindra.
Jereo daholo Recipe Air Fryer eto .
Tsy misy Fyer Air? Tsisy olana! Ny mahandro ao anaty lafaoro no ampiasainay nahandro nahandro nahandro .
LAMBO SIRA Ity resipeo ity dia manomboka amin'ny tsiranoka 3-kilao, fa ny hama lehibe kokoa kosa dia azo zaraina ho ampahany roa mitovy raha mbola mifanaraka amin'ny fryer-n'ny rivotra. Ny lakilen'ny hamonin-drivotra be mando dia ny fonosina ao anaty foil ilay ham mba avelany hanafana nefa tsy mahazo loko na maina. Alao antoka fa milaza ny ham-nao masaka tanteraka amin'ny fonosana.
ankosotra Ham glaze mora atao. Mampiasa siramamy volontsôkôlà izahay fa raha tsy manana kosa dia ampiasao izay zava-mamy anananao (toy ny tantely na jelly mihalefaka).
fomba fahandro mampiasa volontsôkely vita amin'ny hash nopotehina
Ahoana no fahandro Air Fryer Ham
Preheat fryer air & fonosina fo amin'ny foil (isaky ny resahina etsy ambany).
Ampio ny ham amin'ny rivotra fryer. Mandritra ny fandrahoan-tsakafo amam-borona dia manaova fangaro akora.
Misokatra foil vita amin'ny aliminioma ary esory ilay henina.
Manohiza mahandro mandra-pahatonga ny hafanana. Saraho ary mahandro minitra vitsy mba ho volontany.
Ny ham dia masaka aloha nofonosina foil mba hahafahany manafana nefa tsy maina. Rehefa masaka dia aforeto ny sisin'ny foil fa tsy ny fomba rehetra. Ianao dia maniry ny hisintona ny ranonorana amin'ny glaze ny foil mba tsy hirehitra ao ambanin'ny fryer amin'ny rivotra izy ireo.
Mandritra ny fialan-tsasatra amam-boasary dia apetraho amin'ny alàlan'ny menaka ao anaty fryer ny legioma ho an'ny sakafo mora!
Sides tsara ho an'ny sakafo hariva
Vonona ny fitsangantsanganana sy ny potluck, miaraka amin'ny saika na inona na inona!
mandra-pahoviana no mahandro ny fe akoho
Salady: salady broccoli , na kilasika salady ovy na salady macaroni .
Starches: Vilany casserole , ovy nopetahana na vita amin'ny mahandro miadana na ovy nopotsehina .
Legioma: Voanjo & karaoty, broccoli miaraka amin'ny fromazy , legioma natsatsika rehetra tianao.amin'ny tsiro tsara indrindra.
Fomba fampiasana Hamà sisa tavela
Tadiavo ny ankafizinay rehetra resipeo sisa tavela ham Eto.
Cheesy Ham Casserole - fampiononana masaka ao an-trano
Soup misasaka - mahasalama sy manome tsiro
Chicken Cordon Bleu - ankafizin'ny mpamaky
Sakafo sakaosy broccoli miaraka amin'i Ham - mora & cheesy
Salady Ham - resipeo kintana 5
Ham sy Chowder katsaka - manankarena & mamy
Ham Balls - mando sy manome tsiro tokoa
Ianao ve nanao an'ity Air Fryer Ham ity? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo35 minitra Fotoana manontolo40 minitra Fanompoana4 MpanoratraHolly Nilsson Mora ampiasaina ity Air Fryer Ham tsy mahomby ary mivoaka malefaka sy mando isaky ny mandeha! pirinty Pin
▢1 KELY ham masaka tanteraka manodidina ny 3 pounds
▢rOA tablespoons siramamy volontany
▢1 sotro Honey
▢1 sotro ranom-boasary na ranona mananasy
Preheat fryer ny rivotra hatramin'ny 320 ° F.
Fonosy amin'ny foil ny ham, azo antoka fa eo an-tampony ny seam mba hahafahana manokatra.
Apetraho ao anaty fryer ny ham ary nofonosina 25 minitra.
Mandritra ny fandrahoan-tsakafo dia amboary ny akora fitaratra.
Aorian'ny 25 minitra, esory ny ham sy handrotsaka glaze ambony.
Avereno ao anaty fryer amin'ny rivotra (seam akaiky indray) ary andrahoy 10-15 minitra fanampiny na mandra-pahatongan'ny ham hahatratra 135-140 ° F.
Aforeto ny foil ary andraho ny ham, 5-10 minitra fanampiny na vahao ny volon-koditra ary mahatratra 145 ° F ny ham. Mialà sasatra 10 minitra alohan'ny hanompoana.
Tsy misy Fryer Air? Tsisy olana! Ampiasainay ity fomba fahandro ity manendasa ham amin'ny lafaoro . Azo masaka ao koa a mahandro miadana . Raha lava loatra ny hamonao ka tsy tafiditra ao anaty fryer-nao dia azo tapatapahana alohan'ny fonosana amin'ny foil. Raha manapaka ny hamoka alohan'ny mahandro dia mety mila mampihena ny fotoana fandrahoana ianao. Mety miovaova ny «franc», ny andrana io dia notsapaina a Cosorieran'ny rivotra 5.8qt . Zahao aloha ny hamanao ka tsy misakafo be loatra ary maina. Mampiasà a thermometer hena hahazoana antoka fa tsy be loatra ny masony. Zava-bika! Ny hama somary malefaka miolakolaka dia mila fotoana kely kokoa noho ny ham feno baolina kitra.
Kaloria:550,Karbohidraty:iraika ambin'ny foloh,Proteinina:64h,Tavy:26h,Tavy voky:6h,Cholesterol:248levitra,Sodium:3931levitra,Potasioma:979levitra,Fibre:1h,Sugar:iraika ambin'ny foloh,Vitamina A:9IU,Vitamina C:81levitra,Kalsioma:28levitra,Vy:3levitra
Teny lakileAir Fryer Ham, fomba fahandro Air Fryer Ham, Air Fryer Ham tsara indrindra, ny fomba fanaovana Air Fryer Ham Mazava ho azyAir Fryer, Sakafo hariva, Entree, Ham, Main course masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .